Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) - Hello Sayarwon
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ » Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း)
ရေးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
Acetylcholine receptor antibody ဆိုတာဘာလဲ။
Acetylcholine receptor antibody သည် ကြွက်သားဆဲလ်များတွင်ပါရှိသော Acetylcholine receptor များအား ပေါင်းစပ်မရအောင် တားဆီနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Acetylcholine သည် ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး Acetylcholine receptor antibodies များသည် ကြွက်သားမကျုံ့နိုင်တော့အောင် တားနိုင်၏။ ဒီဖြစ်ရပ်သည် myasthenia gravis (MG) ဆိုသည့်ရောဂါ၏ ဝိသေသလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။
Acetylcholine receptor antibodies များကို ၈၅%သော myasthenia gravis (MG) ရောဂါသည်များတွင် တွေ့ရ၏။ အမြင်ဆိုင်ရာ myasthenia ဖြစ်နေသောလူနာများတွင်မူ antibodies မြင်ရသည့်နှုန်း ပိုနည်းသည်။
Acetylcholine receptor antibodies များသည် myasthenia gravis (MG) ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးချက်များတွင် တန့်ပြန်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ACHR positive ပြောင်းသည့် antibodies စစ်ဆေးမှုသည် လက္ခဏာမပြသေးသည့် MG ကို သိနိုင်သည်။ သို့သော် မြှားဆိပ်ကဲသို့သော အာရုံကြောကြွက်သားကြား ကူးလူးခြင်းကို တားသည့်ဆေးများကိုသုံးထားလျှင် ဒီစစ်ဆေးမှုကိုမလုပ်ရပါ။
Acetylcholine receptor antibody စစ်ဆေးမှုကို ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ။
Acetylcholine receptor antibodies ကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် သုံး၏။
• MG ရောဂါရှိမရှိသိရန်အတွက် MG ကဲ့သို့လက္ခဏာများကို ခံစားနေရသည့်လူနာများတွင် သုံးသည်
• ခုခံအားဖိနှိပ်သည့်ကုထုံးအား တုန့်ပြန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သုံးသည်။ ၎င်းကုထုံးသည် MG ကုသရာတွင်သုံးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Acetylcholine receptor antibodies စစ်ဆေးမှုလုပ်ရသေးခင် ဘာတွေသိထားရမလဲ။
Antibodies အကုန်လုံးသည် အာရုံကြောနှင့်ကြွက်သားကူးလူးခြင်းကို လျော့ချသည်မဟုတ်ပါ။ သင့်၌အောက်ပါအချက်များရှိလျှင်
ကိုယ့်တွင်ရောဂါမရှိပါပဲ ရှိသည်ဟု အဖြေမှားထွက်နိုင်ပါသည်။
• amyotrophic lateral sclerosis ရောဂါရှိခြင်း
• Penicillamine myasthenia syndrome သို့မဟုတ် Lambert-Eaton syndrome ရောဂါများရှိခြင်း
Antibodies လယ်ဗယ်ကိုတိုးမြင့်စေသည့် ဆေးများတွင် ကြွက်သားပြေလျော့ဆေးဖြစ်သော cosuccinylcholine နှင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးတို့ပါဝင်ပါသည်။
ကိုယ်ခံအားဖိနှိပ်သည့်ဆေးများသည် လက္ခဏာမပြသေးသည့် MG လူနာများတွင် antibodies များဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးနိုင်၏။
ဒီစမ်းချက်အားမလုပ်ခင် သတိပေးချက်များ အထူးသတိပြုရမည်များကို နားလည်ထားရန်အရေးကြီး၏။ မေးခွန်းများရှိလျှင် ညွှန်ကြားချက်များ ထပ်သိလိုသည်များရှိလျှင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
acetylcholine receptor antibody စစ်ဆေးရန် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။
acetylcholine receptors antibodies မစစ်ဆေးခင် အထူးပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များမရှိပါ။ သို့သော် ဆရာဝန်သည် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မှတ်စုပြုနိုင်ပါသည်။ အထူးပြင်ဆင်ထားရမည်များ ရှိမရှိ ဆရာဝန်အားမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လက်ဖျံမှသွေးကို သူနာပြုများအလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်ရန် လက်တိုအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်သင့်သည်။
acetylcholine receptors antibodies စစ်ဆေးနေစဉ် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
စစ်ဆေးမှုအထမြောက်စေရန်အတွက် ဆရာဝန်သည် အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
• သွေးတိတ်စေရန် လက်မောင်းတွင် ပတ်တီးစည်းခြင်း
• အပ်ထိုးသည့်နေရာတွင် ပိုးမဝင်စေရန် အရက်ပြန်နှင့်ပိုးသတ်ခြင်း
• သွေးပြန်ကြောထဲသို့အပ်စိုက်ခြင်း။ လိုအပ်လျှင် တစ်ခါထပ်ပိုပြီး စိုက်ပါလိမ့်မည်။
• လိုအပ်သည့်ပမာဏရပါက လက်မောင်းတွင်ပတ်ထားသည့် တိပ်များကိုဖယ်ခြင်း
• အပ်စိုက်ရာတွင် ပတ်တီး သို့ ဂွမ်းဖြင့်ဖိခြင်း
• Urgo ဆေးများသုံးခြင်း
• ၆ လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ခုခံအားတိုးအောင်လုပ်ထားခြင်းများရှိလျှင် စစ်ဆေးမှုပုံစံကို မှတ်ထားခြင်း။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်သူများသည် စစ်ဆေးချက်အဖြေကိုသက်ရောက်စေမည့် ဆေးများကို စာရင်းပြုစုပေးခြင်း
acetylcholine receptors antibodies စစ်ဆေးပြီးနောက် ဘာဖြစ်မလဲ။
အပ်စိုက်ရာတွင် နာကျင်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချို့သူများတွင် အရေပြားအားအပ်နှင့်ထိုးသည့် နာကျင်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။ သို့သော် အပ်သွေးပြန်ကြောထဲရောက်ပြီး သွေးစုပ်ယူနေချိန်တွင် လူအများစုသည် နာကျင်မှုကိုမခံစားရတော့ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် သင်၏နာကျင်မှုလယ်ဗယ်သည် သူနာပြု၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ သွေးပြန်ကြော၏အခြေအနေနှင့် သင်၏နာကျင်မှုကိုခံစားနိုင်စွမ်းပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
သွေးထုတ်ယူပြီးနောက် ပတ်တီးစကိုသုံးပြီး အပ်စိုက်သည့်နေရာကိုဖိကာ သွေးတိတ်ရပ်အောင် လုပ်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးပြီးနောက် နဂိုအလုပ်များကို ဆက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
acetylcholine receptors antibodies အကြောင်း မေးစရာများရှိလျှင် ပိုမိုနားလည်စေရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့်ဆေးရုံပေါ်မူတည်ပြီး ပုံမှန်တန်ဖိုးသည် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်တန်ဖိုးများကို ရလဒ်စာရွက်တွင် တစ်ခါတည်းပါမည်ဖြစ်သည်။ ဒီထက်ပိုသိလိုပါက သင်၏အထူးကုနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
The antibody binds to Ach (in body) ≤0.02 nmol / L
Antibodies alter Ach receptor (muscle) 0-20% (indicate number of ACh receptors reduced)
Striated muscle antibodies: <1:60
အောက်ပါအခြေအနေများကြောင့် ရလဒ်တန်ဖိုး မြင့်တက်နိုင်ပါသည်။
• Myasthenia gravis ရောဂါ
• Mysathenia မျက်စေ့ရောဂါ
• Thymus ကင်ဆာ
ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့်ဆေးရုံပေါ်မူတည်ပြီး acetylcholine receptor antibody ပုံမှန်တန်ဖိုးသည် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်နှင့်ပတ်သတ်၍သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) ကဘာလဲ။
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ငါ့ဆီမှာ Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Acetylcholine Receptor Antibody (အက်စီတိုင်းကိုလင်း ပေါင်းစည်းခြင်းကို တားသော ပဋိပစ္စည်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Pagana, Kathleen D, and Timothy J. Pagana. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory
Tests. St. Louis, Mo: Mosby/Elsevier, 2010 Edition. Page5– 6.
Acth Stimulation Test With Cosyntropin (cosyntropin ဖြင့် ACTH လှုံ့ဆော်သော စမ်းသပ်မှု)
Hamstring Strain (ပေါင်နောက်ကြွက်သားစု ထိခိုက်ခြင်း)